Lixabiso siwisa aluminium iindawo ingxubevange mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Baza, izahlulo aluminium ingxubevange
IAluminiyam ingxubevange sisinyithi esingenantsimbi. IAluminiyam ingxubevange inobuninzi obuphantsi kodwa amandla aphakamileyo ngokuthe gca, asondeleyo okanye agqitha kulawo akumgangatho ophezulu wentsimbi. Ineplastikhi elungileyo kwaye inokuqhubekiswa kwiiprofayili ezahlukeneyo. Inokuqhuba kombane ngokugqwesileyo, ukuqhuba kobushushu kunye nokumelana nomhlwa. Isetyenziswa ngokubanzi kumzi mveliso kwaye ukusetyenziswa kwayo kungokwesibini kuphela kwintsimbi.
I-Aluminium ingxubevange yokufa yokuphosa ulungelelwaniso lwentetho yealuminium
Ezinye ii-aluminium alloys zinokunyangwa ngobushushu ukuze zifumane iipropathi ezilungileyo zoomatshini, iipropathi zomzimba kunye nokumelana nomhlwa. Ouzhan ungenza ngokusesikweni aluminiyam ingxubevange die-ekubunjweni iimveliso ngokweemfuno zakho kunye nemizobo. Amasimi ayo esicelo asetyenziswa ikakhulu kwi-elektroniki, iimoto, iimoto, izixhobo zasekhaya kunye nezinye kwishishini lezonxibelelwano, ezinye iimveliso ezikumgangatho ophezulu zealuminium ezinokusebenza okuphezulu, ukuchaneka okuphezulu, kunye nobukhali obuphezulu zisetyenziswa nakwimizi-mveliso eneemfuno eziphakamileyo ezinjengekhulu iinqwelomoya neenqanawa. Ukusetyenziswa okuphambili kusekho kwiindawo zezixhobo ezithile.
Izinto eziluncedo ze Ouzhan aluminium ingxubevange die eyahlulayo
Uluhlu olubanzi lokuphosa
-I-Castings inokuchaneka okuphezulu kunye noburhabaxa bomgangatho ophantsi
-Ukusetyenziswa kwesinyithi okuphezulu
-Ukuphosa phezulu amandla kunye nobulukhuni bomhlaba
Inkonzo yokuphosa i-china eyenziwe nge-aluminium die-China Shanghai aluminium alloy die die castling parts
I-Ouzhan ngumzi mveliso wokudibanisa urhwebo kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo enye yokujika kunye neenkonzo zokugaya umatshini. Ngokweemfuno zabathengi, ukuphakama okuphezulu kokuchaneka kwe-aluminium die-casting enomgangatho ozinzileyo nonokuthenjwa kungacutshungulwa. La malungu omatshini enziwa kusetyenziswa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu, efunyanwa kubathengisi abaziwayo beemarike. Iqela lethu lobuchwephesha elinamandla kunye nobuchule kunye nolawulo olufanelekileyo kunye nenkqubo yokusebenza inokuqinisekisa ukwenziwa ngokugqibeleleyo kwealuminium alloy die-casting parts mechanical. Ukongeza, i-aluminium alloy die-casting iimveliso zibonelela ngokungqongqo ngemigangatho esemgangathweni kwaye inokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini. Kwaye sinokubonelela ngeenkonzo zokukhuphisana ngamaxabiso e-aluminium alloy die-casting parts kubathengi bethu abaxabisekileyo.
Apho kusetyenziswa aluminium ingxubevange die-eyahlulayo iindawo
Izixhobo zeHardware (i-aluminium alloy die-casting) zibhekisa kumalungu omatshini okanye izinto ezenziwe ngehardware, kunye nezinye iimveliso ezincinci zekhompyutha. Ingasetyenziselwa yodwa okanye njengoncedo.
Njengezixhobo zehardware, izixhobo zekhompyutha, ukusetyenziswa kwezixhobo zemihla ngemihla, izixhobo zokwakha kunye nezinto zokhuselo. Uninzi lweemveliso ezincinci zekhompyuter azizizo iimpahla zokugqibela zabathengi. Endaweni yoko, zisetyenziswa njengemveliso yokuxhasa imveliso, iimveliso ezigqityiweyo, kunye nezixhobo ezisetyenziswa kwinkqubo yemveliso. Inxalenye encinci kuphela yeemveliso zentsimbi zemihla ngemihla (izixhobo) zezixhobo zabathengi eziyimfuneko kubomi babantu.
Izinto eziluncedo ze-Ouzhan Aluminium Die Casting Service
-Zonke iimveliso zokuphosa ngokuchanekileyo zealuminium ziphantsi kovavanyo olungqongqo lomgangatho.
-Ngokuya kwimizobo okanye iisampulu zokwenza ngokuchanekileyo iindawo ze-aluminium alloy die-casting.
Egqithileyo Custom die die ekubunjweni iindawo
Okulandelayo: Ukuphosa i-aluminium alloy kufa